चिया विकास निगम: एक एकड जग्गाको मासिक भाडा जम्मा १०३ रुपैयाँ ? | Tungoon
चिया विकास निगम: एक एकड जग्गाको मासिक भाडा जम्मा १०३ रुपैयाँ ?
काठमाडौं । चिया विकास निगमले सम्झौता बमोजिम आर्थिक व्यवहार नगरेको ठहरसहित सरकारले अन्ततः हिसाब मिलान गर्ने ध्येयले कार्यदल गठन गरेको छ। झन्डै ५ महिनाअघि गठन भएको कार्यदलले मौजुदा विवादका विषय निरुपण गर्न सुझाव दिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैछ।
Previousएआईवीटीमा विद्यार्थी पठाउने कंगारु पहिले नै कालो सूचीमा
Nextओलि सरकारलाई झड्का, सात महिनामै बैदेशिक लगानी दुई अर्वले घट्यो